ရွှေကျင်မြို့နယ်မှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ၃ဝဝ ကျော်ကို သဘာဝခေါ်သံဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆေးကုသမှုပေး၊ ကျန?? - Yangon Media Group
ရွှေကျင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာသုံးရွာမှ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ၃ဝဝ ကျော် ကို တက္ကသိုလ်ခြေလျင်နှင့် တောင် တက်အသင်း သဘာဝခေါ်သံ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆေးကုသမှုပေး ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ကျန်ရှိနေသည့် ကျေးရွာများသို့သွားရောက်၍ ကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ထပ်မံ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါဆေးကုသပေးမှုများ ကို သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျန်ရှိနေသည့်ကျေးရွာများသို့ ထပ် မံသွားရောက်မည်ဟုဆိုသည်။ ”ဦးတို့တက္ကသိုလ် ခြေလျင် နှင့် တောင်တက်အသင်း သဘာဝ ခေါ်သံဖောင်ဒေးရှင်းက တောင် ပေါ်ဒေသနဲ့ ဘေးသင့်တဲ့ဒေသ တွေမှာ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပံ့ပိုးကူ ညီနေပါတယ်။ ရွှေကျင်မြို့နယ်အ တွင်းရှိ ကျေးရွာသုံးရွာက ရေဘေး သင့်ပြည်သူ ၃၂ဝ ကျော်ကို ဆေး ကုသမှုပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမအ ကြိမ်သွားတာကတော့ သြဂုတ် ၁၉ ရက်မှာ သွားခဲ့တယ်။ စက်တင်ဘာ လအတွင်းမှာလည်း ဒုတိယအကြိမ် အနေနဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေ မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေ ကို ဆေးကုသမှုတွေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆေးကုသရေး အဖွဲ့တာဝန်ခံ၊ တက္ကသိုလ်ခြေလျင် နှင့် တောင်တက်အသင်း သဘာဝ ခေါ်သံဖောင်ဒေးရှင်း၏အမှုဆောင် ဦးကျော်နိုင်က သြဂုတ် ၂၂ ရက် တွင်ပြောသည်။
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ၏ ကယ်ဆယ်ရေးသည် အရေးကြီးသ လို ကယ်ဆယ်ရေးပြီးနောက် ကျန်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးရန် လည်း အလွန်အရေးကြီးကြောင်း သိရသည်။ ”ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုပေးဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဦးတို့အဖွဲ့အပြင် အခြားဆေးကုသ ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းလိုတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရွှေကျင်မှာ အိမ် တွေအကုန်ရေမြုပ်တဲ့အထိ ကျေးရွာ ပေါင်းရာချီ၊ ထောင်ချီဖြစ်ခဲ့တာ။ အခုဦးတို့ကုသပေးတာ ကျေးရွာ သုံးရွာပဲရှိသေးတယ်။ အခြားကျန် ရှိနေသေးတဲ့ရွာတွေလည်း ရှိနေတဲ့ အတွက် ဆေးကုသမှုအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရွှေကျင်မြို့နယ်တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ၊ ကျွန်းတဲစုကျေးရွာနှင့် ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အင်းပုလဲ ကရင်စုကျေးရွာတို့ရှိ ရေဘေးသင့် လူနာ ၃၂ဝ ကျော်ကို အသင်းနာယ ကနှလုံးနှင့် အထွေထွေရောဂါ အ ထူးကုသမားတော်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မေအုန်း ဦးဆောင် ၍ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးမှ ကုသပေးခဲ့ပြီး သွေးတိုးရောဂါ၊ ရေ နှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများဖြစ် သည့် ဖျားနာ၊ နားပြည်ယို၊ ကိုယ် အရေပြားရောဂါများအဖြစ်များ နေကြောင်းနှင့် ပညာ့ဗိမာန်ကျောင်း မှ ကလေး ၁၄ဝ ကိုလည်း ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း၊ ဗီတာမင်ဆေးများပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဘားအံမြို့တွင် သံလွင်မြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ် တက်လာပြီး လူဦးရေ ၁ဝ၇ဝ၄ ဦး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို?
အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်ကာ တံတိုင်းဖြတ်ကျော်ရန် နှစ်မိနစ်သာ အချိန်လိုအပ်
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ ခရီးသွားနေရာသစ် တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည့် အမြင့်ပေ ၈၄ဝ ရှိ ကမ့်ဖာဒန့်?
ဟာဇက်၏ ခြေစွမ်းပိုကောင်းရန် မြှင့်တင်ပေးလိုသည်ဟု ဆာရီပြောဆို၊ လက်ထောက်နည်းပြ အဖြစ် ချဲလ်ဆ